Muxuu ku qotomay kulanka khaaska ahaa ee Muqdisho ku dhexmaray Michael Keating & Al-Othmani - Caasimada Online
Home Warar Muxuu ku qotomay kulanka khaaska ahaa ee Muqdisho ku dhexmaray Michael Keating...
Muxuu ku qotomay kulanka khaaska ahaa ee Muqdisho ku dhexmaray Michael Keating & Al-Othmani
Muqdisho (Caasimada Online)-Sida ay baahisay Wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM, waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating iyo Safiirka Imaaraadka Carabta ee Somalia Maxamed Axmed Al-Othmani.
Waxa uu kulanka ka dhacay Xarunta Safaarada Imaaraadka ee magaalada Muqdisho, waxa ayna labada mas’uul kawada hadleen Xiriirka Imaaraadka kala dhexeeya DFS, Is garabtaaga dowlada Somalia, Wanaajinta xiriirka Somalia iyo in dib loo hagaajiyo xiriirka QM iyo Imaaraadka.
Waxa ay Michael Keating iyo Al-Othmani isla soo qaaden sidii loo kordhin lahaa shaqo abuurka loo sameynayo dhalalnyarada Soomaaliyeed, ammaanka dalka, xasiloonida, Horumarka, iyo sidoo kale xaaladda bini’aadanimo.
Mr Michael Keating, ayaa ammaanay dadaalka dowlada Imaaraadka Carabta, taageerada joogtada ah ee Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan iyo kaalinteeda ugu weyn ee horumarinta dalka.
Sidoo kale, Safiirka Imaaraadka Carabta ee Somalia Maxamed Axmed Al-Othmani, ayaa ka mahadceliyay is araga Michael Keating isagoo muujiyay sida uu u xoojiyay xiriirka iskaashiga ah ee u dhaxeeya Safaaradda Imaaraadka iyo Xafiiska QM.
Geesta kale, qoraalka wakaaladda ayaa waxaa lagu sheegay in Michael Keating iyo Al-Othmani ay kulankooda ku kala saxiixdeen qodobo dhowr ah oo ku xeeran xiriirka QM iyo Imaaraadka ee ku aadan hanaanka wada shaqeyneed.